Izindaba - Ingqungquthela Yokumaketha Yesibili Sekota ye-2020 · Iyashesha futhi Ithukuthele
Ingqungquthela Yokumaketha Yesibili Yekota ka-2020 · Iyashesha futhi Ithukuthele
Ngo-8 ekuseni ngoJulayi 5, 2020, umhlangano wokumaketha wekota yesibili kaKaihua Mould ka-2020 wabanjwa ngesikhathi ehholo lenkomfa laseTongji Huangyan Rural Revitalization College.
Bangu-65 abasebenzi bokumaketha nabaholi abaphezulu abasuka eHuangyan Headquarters naseSanmen Factory ababambe iqhaza kule ngqungquthela yezokumaketha. Ingqungquthela ihlukaniswe ngezindikimba ezimbili:
MeetingUmhlangano wokumaketha wekota yesibili ka-2020
②Umsebenzi Wokwandisa we-4 "Fast and Passion"
Izikhathi ezimangalisayo zemihlangano yokuthengisa
Ekuqaleni komhlangano, uSihlalo uLiang Zhenghua wethule inkulumo.
Okokuqala, uSihlalo uLiang Zhenghua wabelane ngedatha "Izinga lokuphothulwa kohlelo lwe-oda kwikota yesibili belingu-101%, futhi ukusebenza kukhuphuke ngo-35% unyaka nonyaka." Usihlalo uLiang Zhenghua ukuqinisekisile ngokuphelele ukusebenza kwabakhangisi abebekhona kwikota edlule futhi wabonga wonke umuntu. Ngemuva kwalokho wabe esehlaziya ngokujulile imakethe yamanje, watshela wonke umuntu ngokugxila nasekuqondisweni komsebenzi kwekota elandelayo, wabeka amagama amane abalulekile: “umjikelezo omfushane”, “ulwazi lwamakhasimende”, “imikhiqizo emisha”, “amakhasimende” umlingani ”.
Okulandelayo, umsebenzi ngamunye wezokumaketha weza esigabeni ukuzobika isifinyezo somsebenzi sekota eyedlule nohlelo lomsebenzi ngekota elandelayo.
UGina, onguMqondisi Wezentengiso eMnyangweni Wezokukhangisa Kwamanye Amazwe, wabelane nawo wonke umuntu: “Ngenxa yomthelela wobhadane lwaphesheya kwezilwandle, eminye imibukiso ihlehlisiwe noma yaze yamiswa, futhi nohambo lwamakhasimende avakashile lungahlehliselwa u-2021. Wonke umuntu okhona kumele nezimo, lungisa isimo sazo, futhi zinqwabelene, kungakhathaliseki ukuthi ungaxhumana kanjani namakhasimende kuzo zonke izinhlangothi! ”
Abaholi abaphezulu benkampani bangene esiteji ngamunye ngamunye ukuze babelane ngemizwa yabo kwikota yesibili kanye nesiqondiso sokwenza ngcono kwikota elandelayo.
U-Liu Qingjun, Iphini Likamongameli Ophethe weNdlunkulu yaseHuangyan
U-Liang Zhengwei, Iphini Likamongameli Ophethe weSanmen Factory
Kuyashesha futhi Kuthukuthele
“Di——” Ngempempe yomqeqeshi, lo msebenzi wokufinyelela ngaphandle uqale ngokusemthethweni.
Lo msebenzi wokufinyelela kubantu ikakhulukazi unezingxenye ezi-4, “Icebreaker”, “Challenge Yourself: High-altitude Tightrope Walk”, “Team 150, Power Circle” ne- “Happy BBQ”.
Ake sizwe umoya ofudumele emcimbini ndawonye!
Impumelelo ivela ethimbeni, futhi iqembu liyazifeza.
Umdlalo wokuqhekeka kweqhwa wephula ngempumelelo imigoqo phakathi kwabantu, wakha indawo enhle yokuxhumana, futhi uvuse umdlandla nokulwa kwamalungu eqembu.
"Ukuhamba ngentambo ephezulu"
Kusukela ekuqaleni kugcwele ithemba, igxathu eliya maphakathi nesibhakabhaka, ukunqikaza kancane ukuqhubekela phambili, ngaphansi kokumemeza nokukhuthaza abangani bami, esigabeni esinzima kakhulu, ukuthola ubuhle buqamama, ukuthatha unyawo oluqinile, nokusondela ekugcineni isinyathelo ngesinyathelo. Finyelela izinhloso bese uziphonsela inselelo.
“Ithimba 150, Umbuthano Wamandla”
Ukwahlukaniswa kwabasebenzi, ukukhuthazana, ukuthembana, ukuzwa umngcele phakathi kokungenzeka nokungakwazi.
Njengoba kufika ubusuku, umoya usafudumele
I- "Happy BBQ" imemezele ukuvulwa
I-Kaihua Hummingbirds ekude kakhulu nomuzi ophithizelayo wedolobha
Bonga ngokugcwele isimo esihle sokuhlangana kweqembu emvelweni
Hlanganyela uziphonsele inselelo
Thuthukisa umoya weqembu nokuzwana nokuthembana phakathi kwamalungu eqembu
Ngokubambisana, iqembu liyiqembu